Syberia 2, Mac အတွက်ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်လျှော့စျေး ငါက Mac ပါ
Syberia2သည် Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာလျှော့ချနိုင်သည်
ယရှေု Arjona Montalvo | | အားကစားပြိုင်ပွဲ, Mac က App Store ကို, Mac OS X ကို
Syberia2တစ် ဦး လျှော့ချသည် 66% ကန့်သတ်သောအချိန်နှင့်၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းကနေ€ 14,99 ကနေလျှော့ချသည် ယူရို ၄.၉၉ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ မနေ့ကငါတို့ပြောခဲ့တာတွေရဲ့ပထမအပိုင်း Syberia ၎င်းသည်စျေးနှုန်းလည်းကျဆင်းခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်ချီးကျူးခဲ့သောအပိုင်းကိုလည်းထိမိခဲ့သည် စပိန်ဘာသာဖြင့်။ ပျောက်ကွယ်သွားသောအမွေခံအားရှာဖွေရန်အနောက်နှင့်အရှေ့ဥရောပများရှာဖွေပြီးနောက်ကိတ်ဝေါကာသည်ရှည်လျားပြီးခက်ခဲသောခရီးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Hans Voralberg ၏လက်မှတ်နှင့်အလိုအလျောက်စက်ရုံ၏ဝယ်ယူမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ မစ်ရှင်ပြီးပြီ? ။ ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့နယူးယောက်ရှေ့နေအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
La ထူးဆန်းတဲ့စုံတွဲ ထိုလုလင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့သည် ကိတ်တုတ်ကောက် နှင့်အဟောင်းနှင့်စားပြီး Hans voralberg ယခုသူသွားရန်လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုယူရမည်ဖြစ်သည် Syberia ၏ဒဏ္legာရီကြီးကျယ်ခမ်းနားသောနောက်ဆုံးကိုရှာဖွေပါ ကြာမြင့်စွာမေ့လျော့နေသည့်စကြာ ၀ ofာ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက Hans စတင်ခဲ့သောလွန်ခဲ့သောအိမ်မက်ဆန်သည့်ရှာပုံတော်ဖွင့်ပွဲအပြီးတွင်သူနှင့် Kate တို့အတူတကွနေထိုင်ရန်လိုသည် အရင်ကထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတားအဆီးတွေကိုရင်ဆိုင်ပါသင်၏ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ စာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်သင့်အားဂိမ်းကစားခြင်းတစ်ခုထားခဲ့ပါသည်။
ဝေးနှင့်ကျော်လွန်ပြီးတစ် ဦး Syberia ဆန်းကြယ်မှု သင့်ရဲ့ဆိုက်ရောက်မှုကိုစောင့်နေတယ်
တင်ပါတယ်: 11 / 12 / 2014
အရွယ်: 1.30 GB ကို
ဘာသာစကား: စပိန်၊ ဂျာမန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အီတလီ
© 2014 Anuman Interactive မှ SA / Microids / Benoit Sokal
compatibility: OS X 10.4 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်မှ
ချစ်တယ် Syberia2Livecad မှ 4,99 € နှင့်ထံမှခြွင်းချက်စျေးနှုန်းလျှော့ချရေးရ 66%!.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Syberia2သည် Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာလျှော့ချနိုင်သည်
Apple TV4တွင် Safari ဗားရှင်းကိုသူတို့တပ်ဆင်ထားသည်
Mack, အ MagSafe နားကြပ်အပေါက်